UDuke waseCumberland - uNkosana uWilliam Augustus - I-Butcher Cumberland - I-Forty-Five
UMbusi weCumberland - Ubomi bokuqala:
Wazalelwa ngo-Ephreli 21, ngo-1721 eLondon, uNkosana uWilliam Augustus wayengunyana wesithathu weKum George George II kunye noCaroline wase-Ansbach. Xa eneminyaka emine, wanikezelwa ngezihloko zeDuke yaseCumberland, iMarquess yeBerkhamstead, i-Earl kaKennington, i-Viscount ye-Trematon, kunye neBaron ye-Isle yase-Alderney, kunye ne-Knight ye-Bath. Ininzi yolutsha lwakhe lwachithwa eMidgham House eBerkshire kwaye yafundiswa ngoluhlu lwabaqeqeshi abaziwayo kuquka u-Edmond Halley, uAndrew Fountaine, noStephen Poyntz.
Eyintandokazi yabazali bakhe, uCumberland wayejoliswe kumsebenzi wempi esemncinci.
I-Duk of Cumberland - Ukujoyina i-Army:
Nangona ebhalisiwe kunye nabalindi abango-2 abaneminyaka engama-4 ubudala, uyise wayefuna ukuba ahlambulule isithuba se-Lord High Admiral. Ukuya olwandle ngo-1740, iCumberland yaya ngevolontiya kunye ne-Admiral Sir John Norris ngexesha leminyaka yokuqala yeMfazwe ye-Austrian Succession. Awufumani iRoyal Navy ukuba ayithande, wafika emanzini ngo-1742 waza wavunyelwa ukuba aqhubeke nomsebenzi waseBritish Army. Yenza i-general general, uCumberland waya kwilizwekazi elilandelayo kunyaka kwaye wakhonza phantsi koyise kwi-Battle of Dettingen.
UMbusi weCumberland - uMlawuli wezeMpi:
Kwindlela yokulwa, wahlaselwa emlenzeni kwaye ukulimala kwakuya kumkhathaza ngenxa yentsali yokuphila kwakhe. Wakhuthazwa ku-lieutenant jikelele emva kwemfazwe, waba ngumphathi-jikelele webutho laseBritani eFlanders emva konyaka.
Nangona ongenalwazi, uCumberland wanikwa umyalelo weMbutho oManyeneyo waza waqala ukucwangcisa iphulo lokubamba iParis. Ukumnceda, iNkosi uLigonier, umlawuli wamandla, wenziwa ngumcebisi wakhe. Umlindi waseBlenheim kunye neRamillies, uLigonier waqaphela ukungahambi kakuhle kwezicwangciso zeCumberland kwaye ngokufanelekileyo wamcebisa ukuba ahlale ekhuselekileyo.
Njengoko amabutho aseFransi aphantsi koMarshal Maurice de Saxe aqala ukuhambela eTurnai, iCumberland yaqhubela phambili ekuncedeni igumbi le dolophu. Ukubetha neFrentshi kwiMfazwe yasePenenoy ngoMeyi 11, iCumberland yahlulwa. Nangona imikhosi yakhe yahlaselwa ngamandla kwiziko likaSaxe, ukungaphumeleli kwakhe ukufumana iiplanga eziseduze kwakhokelela kuye ukuba ahoxise. Ayikwazi ukugcina iGhent, Bruges, kunye ne-Ostend, iCumberland ibuyele eBrussels. Nangona sele ihlulwe, iCumberland yayisabonwa njengomnye wabaphathi bamaBrithani abangcono kwaye ikhunjulwa kamva ngaloo nyaka ukunceda ukubeka phantsi uYakobi.
UMbusi weCumberland - I-Forty-Five:
Eyaziwa nangokuthi "i-Forty-Five", i-Jacobite Rising yaphefumlelwa ngokubuyela kukaCharles Edward Stuart eScotland. Umzukulu kaJames II, "uBonnie Prince Charlie" wakhulisa umkhosi oqokelelwe kakhulu kwiinkampani zase-Highland waza waya e-Edinburgh. Ukuthatha esi sixeko, wabulala umbutho waseburhulumenteni e-Prestonpans ngoSeptemba 21 ngaphambi kokuqalisa ukuhlasela eNgilani. Ukubuyela eBrithani ngasekupheleni kwe-Oktobha, iCumberland yaqalisa ukunyuka enyakatho ukuba ilandele uYakobi. Emva kokuqhubela phambili ukuya eDerby, oonyana bakaYakobi bakhethwa ukuba babuyele eScotland.
Ukuphishekela umkhosi kaCharles, iinkokeli eziphambili ze-Cumberland zixhotywe kunye namaYakobi eClafton Moor ngoDisemba 18.
Ehamba ngasenyakatho, wafika eCarlisle waza wanyanzelisa igosa likaYakobi ukuba anikezele ngoDisemba 30 emva kokungqingwa kwamalanga asithoba. Emva kokuhamba ngokukhawuleza ukuya eLondon, uCumberland wabuyela ngasentla emva kokuba uLieutenant General Henry Hawley wabethwa eFalkirk ngoJanuwari 17, 1746. Umphathi wamagosa eSkotland, wafika e-Edinburgh ngasekupheleni kwenyanga ngaphambi kokufudukela enyakatho ukuya eAberdeen. Ukufunda ukuba umkhosi kaCharles wawusentshonalanga kufuphi ne-Inverness, iCumberland yaqalisa ukuhamba kuloo ndlela ngo-Ephreli 8.
Uyazi ukuba amaqhinga kaYakobi athembele kwi-Highland icala, u-Cumberland waqhaqhabalalisa amadoda akhe ekuchaseni lolu hlobo lokuhlaselwa. Ngo-Ephreli 16, umkhosi wakhe wadibana noYakobi kwi- Battle of Culloden . Ukuyalela amadoda akhe ukuba angabonisi ikota, uCumberland wabona ibutho lakhe lonakalisa ukutshatyalaliswa ngokutsha kwebhola likaCharles.
Ngenxa yempi yakhe yachithwa, uCharles wabaleka ezweni kwaye ukunyuka kwaphela. Ekuvukeni kwemfazwe, uCumberland wayala amadoda akhe ukuba atshise izindlu aze abulale abo bafunyanwa ukukhusela abavukeli. Le miyalelo yamkhokelela ekufumaneni i-sobriquet "I-Butcher Cumberland."
I-Duk of Cumberland - Ukubuyela kwilizwekazi:
Ngemiba yaseScotland ihleli, iCumberland iphinda yaqalisa umyalelo weMbutho ohlangeneyo eFlanders ngo-1747. Ngelo thuba, uLieutenant Colonel Jeffery Amherst wayekhonza njengomncedisi wakhe. NgoJulayi 2 kufuphi noLauffeld, uCumberland waphinde wahlukana noSaxe ngeempembelelo ezifanayo ukuhlangana kwabo kwangaphambili. Beaten, washiya kuloo ndawo. Ukunqotshwa kweCumberland, kunye nokulahleka kweBergen-op-Zoom kukhokelela macala omabini ukuba enze uxolo kunyaka olandelayo ngeTyiteyiti yaseAix-la-Chapelle. Kule minyaka elishumi ezayo, uCumberland wenza umsebenzi wokuphucula umkhosi, kodwa wahlulwa ekuthandeni ukuthandwa.
I-Duk of Cumberland - iMfazwe Yeminyaka Yisixhenxe:
Ekuqaleni kweMfazwe Yeminyaka Yesixhenxe e-1756, uCumberland ubuyele kumyalelo wendawo. Ekhokelwa nguyise ukuba aholele uMkhosi wokuBonelela kwilizwekazi, wayenomsebenzi wokukhusela indawo yasekhaya yaseHanover. Ukuthatha umyalelo ngo-1757, wadibana nemikhosi yaseFransi kwi-Battle of Hastenbeck ngoJulayi 26. Kunzima kakhulu, umkhosi wakhe wanyanzeliswa waza wanyanzeliswa ukuba abuyele kwi-Stade. Ebekwe nguMbutho waseFransi ophezulu, uCumberland wagunyazwa nguGeorge II ukuba enze uxolo olulodwa kwiHanover. Ngenxa yoko, wagqiba iNdibano yeKlosterzeven ngoSeptemba 8.
Imiqathango yendibano ibelwe ukuvuselela umkhosi waseCumberland kunye nomsebenzi wesiFrentshi weHanover.
Ukubuyela ekhaya, uCumberland wayegxeka kakhulu ngenxa yokutshatyalaliswa kwayo kunye nemigaqo yendibano njengoko yaveza intlabathi yasentshona yaseBritani, iPrussia. Ukumangalelwa nguGeorge II ngokubanzi, nangona ugunyaziso lokumkani loxolo olulodwa, uCumberland wakhetha ukuyeka umsebenzi wakhe wamajoni kunye noluntu. Ekuvukeni kokusinda kwePrussia kwi- Battle of Rossbach ngoNovemba, urhulumente waseBrithani waphika iSivumelwano saseKlosterzeven kwaye kwakhiwa umkhosi omtsha eHanover phantsi kolawulo lukaDuke Ferdinand waseBrunswick.
I-Duk of Cumberland - Kamva Ubomi
Ukuthatha umhlala-phantsi kwiCumberland Lodge eWesternsor, eCumberland ngokubanzi wawuphephe ubomi bentlalo. Ngo-1760, uGeorge II wafa waza umzukulu wakhe, uGeorge III, waba ngukumkani. Ngeli xesha, uCumberland walwa nomkhwekazi wakhe, i-Dowager Princess yaseWales, phezu kwendima ye-regent ngexesha leengxaki. Umchasi we-Earl we-Bute noGeorge Grenville, wasebenze ukubuyisela uWilliam Pitt amandla njengenkulumbuso ngo-1765. Le mizamo yagqitywa yiphumelelanga. Ngo-Oktobha 31, ngo-1765, uCumberland wafa ngokukhawuleza ngenxa yokuhlasela kwentliziyo xa ehlala eLondon. Ukukhathazeka ngesilonda sakhe esivela kuDettingen, wayesekhulile kwaye wayesebenzeka ngesifo esibuhlungu ngo-1760. UMdumba waseCumberland wangcwatywa phantsi kwe-Henry VII Lady Chapel waseWestminster Abbey.
Umlando waseRoyal Bershire: INkosana William, iDuke waseCumberland
INkosana William, iDuke waseCumberland
UAnnie Besant, Ukholose
U-Anne Hutchinson: Ummeli wenkolo
Imfazwe YaseMelika: uLieutenant General James Longstreet
Gcwalisa Umsebenzi weMculo weGap